Madaxda Maamulada Hirshabele iyo Koofur Galbeed oo wada dacwad ka dhan ah . – Kismaayo24 News Agency
Madaxda Maamulada Hirshabele iyo Koofur Galbeed oo wada dacwad ka dhan ah .
by admin 19th January 2020 0156
Warar hoose oo aan heleyno ayaa sheegaya in madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo HirShabelle ay Muqdisho u yimaadeen cabasho ka dhan ah dowladda Soomaaliya.
Xubno ka tirsan HirShabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa sheegay in la filayo kulamo ay dhaxmaraan Madaxweynaha Soomaaliya iyo Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre oo dhinac ah iyo madaxweynayaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle.
Ciidamo ka goostay Maamulka Puntland oo lagu soo bandhigay deegaanka.
Kooxda Ahlu suna Waljameeca oo lagu amray inay kaguuraan .
TOP NEWS: Doorashada Xoghayaha Ururka Saxafiyiinta NUSOJ oo Maanta lagu wado in Muqdisho ay ka dhacdo yaase ugu cad cad Musharixiinta u taagan qabashada Xilka Xoghayanimada
Tifaftiraha K24 16th May 2016
TOP NEWS: Dhageyso Jubbland Maxay u diyaarisay oo Muhiim ah Dadka qaxootiga ah ee ka soo laabanaya Xeryaha Dalka Kenya???
Tifaftiraha K24 13th June 2016